Morocco: Laba nin oo reer binu Israa'iil ah ayaa loo xiray Morocco si sharci daro ah loo helo waraaqahooda - TELES RELAY
ACCUEIL » International Morocco: Labo qof oo reer binu Israa'iil ah ayaa loo xiray Morocco si sharci-darro ah loogu helo waraaqahooda
13: 17 07.04.2019 (cusbooneysiiyay 14: 28 07.04.2019) URL gaaban
Marrakesh, laba Israel ah, ayaa looga shakisan yahay inay heleen kaararka aqoonsiga ee Moroccan iyada oo loo marayo dukumentiyo been abuur ah, ayaa bilaysku xireen. Xiritaannadaasi waxay dhaceen wax yar ka dib markii ay burburiyeen shabakad dambiile ah oo lagu tuhunsan yahay inay been abuurtay dukumintiyada.
Jimcihii, bilayska Morooko ayaa ku dhawaaqay in la xiray labo ka mid ah Israel oo lagu tuhunsan yahay inay si sharci darro ah u haystaan ​​waraaqaha Morocco, sida ay sheegtay warbaahinta maxaliga ah.
Labada nin ayaa lagu xiray bartamaha magaalada Marrakech. Intaa ka sokow, ciidamada ammaanka waxay qabsadeen ogolaansho joogitaan oo ay bixisay waddanka Latin America, xaqiiqadeeda la xaqiijiyay.
Tuhmanayaasha waxay heleen kaararka aqoonsiga iyagoo caawimaad ka helaya a shabakada taraafikada ka mid ah baasaboorada u shaqeeya faa'iidada muwaadiniinta reer binu Israa'iil "oo aan lahayn asal ahaan Moroccan" burburay bishii Maarso Casablanca.
Burburinta shabakaddan dambiilenimo ayaa keentay in la xiro shan Israel oo leh baasaboorka Moroccan dhammaadka Maarso.
Waxaa intaa dheer, horraantii Maarso, DGSN ayaa mar horeba ku dhawaaqday in la xiray dadka 10 oo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin shabakad ka mid ah gaadiidka dokumentiga, oo ay ku jiraan kaararka aqoonsiga iyo baasaboorka, isagoo aan lahayn asal ahaan Morocco ". Tani waxay ku soo noqotaa lacag caddaan ah oo ka bilaabanta 5.000 ilaa 7.000 US dollars (laga bilaabo 4.400 ilaa 6.200 euros).
Sharciga madaniga ah ee Morocco wuxuu si toos ah ugu oggolaanayaa dhamaan dadka reer Morocco in ay helaan muwaadinimo, iyada oo lagu salaynayo shahaadooyinka dhalashada dhabta ah ee waalidkooda ee Morocco.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://fr.sputniknews.com/afrique/201904071040647199-maroc-israeliens-papiers-illegaux/
Koonfur Afrika: 50 sano ka dib, apartheid la deldelay ayaa ugu dambeyntii ku nasanaya nabadda